Rangers -ka Awoodda asalka ah Xusuusnow soo daahay Thuy Trang: Waxay ahayd Iftiin Noocan oo kale ah - Dhaqanka Pop
Rangers -ka Awoodda asalka ah Xusuusnow soo daahay Thuy Trang: Waxay ahayd Iftiin Noocan oo kale ah
Haddii aad ahayd ilmo '90meeyadii markaa waxaa jira fursad adag oo indhahaaga iyo doolarka waalidku ay gacan ka geysteen gacan ka geysashada ifafaalaha dhaqanka ee Mighty Morphin' Power Rangers. Taasi waxaa laga yaabaa inaysan ahayn xog aad si raalli ah ugu qabatay asxaabtaada goobta ciyaarta, laakiin A.) Qof baa daawanayey iyaga, iyo B.) Hadda waxaad dib u eegi kartaa oo ku qosli kartaa walaacyada carruurnimadaada. Ugu yaraan qaarkood.
Si loogu dabaaldego sannad -guurada 25 -aad ee xilli -ciyaareedkii ugu horreeyay ee bandhigga ee Fox Kids, Madadaalada Todobaadlaha ah sameeyay taariikh afka ah oo isku daraysa nostalgia iyo xisaabaadka gadaal-ka-fiirinta kabka asalka ah. Iyo taariikhdaas afka ah (taas oo waxaa laga akhrisan karaa isaga oo dhan halkan . Thuy Trang , oo ku dhintay shil baabuur 2001 -dii. Wararka sheeg in Trang uu u safrayay inta u dhaxaysa San Francisco iyo LA saaxiibkiis markii haweenay saddexaad ay xakamayn wayday gaadhigii ay saarnaayeen oo ay ku dhufatay wejiga dhagaxa dhagaxa ah. Baabuurka ayaa dhowr jeer rogmaday ka hor inta uusan ku dhicin tareenka badbaadada. Trang wuxuu jiray 27-sano.
isku darka keegga shukulaatada oo aan lahayn pudding
Waxaa laga yaabaa inay tagtay, laakiin lama illaawin, sida ku cad xusuusta kabka ee ka dhigtay KAAS bogagga.
Ex-Red Ranger Austin St. John ayaa ka hadlay sida ay ahayd in laga shaqeeyo mid ka mid ah bandhigyadii ugu waaweynaa ee Trang, isagoo leh:
'Xarunta talisku waxay ahaan jirtay qabow qabow. Isagoo aan xidhnayn spandex mooyee, dhammaanteen waan qabownay. Waxaan is qaban jirnay oo kaliya si aan u kululaano oo aan ugu sheekeysano inta u dhexeysa goobaha toogashada. Waxay la mid ahayd walaalka iyo walaasha. '
Wuxuu yiri Ranger-kii hore ee Black Walter Emanuel Jones:
ku darida miro sanduuqa isku darka keega
'Runtii waxaan ahayn saaxiibo fiican. Aad ayaan ugu faanayay shaqada ay ka qabanaysay filimada sida The Crow! Qalbigayga ayay dhaawacday inaan waayo. Waxay ahayd mid aad u da 'yar waxayna lahayd wax badan oo ay la wadaagto adduunka. Waxaan xusuustaa sida Thuy ugu macaanayd dadka. Waxay si gaar ah waddo ula lahayd carruurta. Tamarteeda ayaa ku soo jiidatay, dhoolla -caddaynteeduna waxay qalbigaaga ka dhigtay mid ammaan ah.
Jason David Frank oo hore u ahaa Green Ranger ayaa si aan kala sooc lahayn loogu weheliyey Trang markii ay dhegeysanayeen, wuxuuna caddeeyay inuu had iyo jeer xusuusan doono iyada oo ku dhex shiidi doonta muuqaalkeeda, dhaawacday iyo in kale. Waxaan xusuustaa in Thuy uu had iyo jeer ku xanuunsanayay goobta, ayuu yiri Frank. Dhammaantood waxay gelisay muuqaalkii, marka mararka qaarkood wax baa dhaca. Waxaan si gaar ah u xusuustaa iyada oo la xanbaarsanaa marar badan dhaawac dartiis. Had iyo jeer waxay ahayd mid togan oo wax walba siin jirtay. Waan xanuunsanayaa mar walba taas iyada ku saabsan.
Blue Ranger David Yost ayaa ka hadlay sida ay ahayd markii uu helay warka geerida Trang. [Ranger -ka Asalka ah ee Amy Jo Johnson] wuxuu ahaa qofkii i soo wacay si uu ii sheego, wuu soo xusuustay. Aad baan u naxay. Waxaan xasuustaa inaan u yeeray Thuys farriinta codka dhowr jeer ka dib markii aan ogaaday kaliya inaan maqlo codkeeda oo aan uga tago farriin aan ku dhahayo Ill ayaa tabaysa. Barashada carruurnimadeedii hore iyo wax kasta oo iyada iyo qoyskeedu soo mareen ka bixitaankii Fiyatnaam, qaxootinimo iyo u soo haajiray Mareykanka, waxaan ku qaddariyay iyada iyo qoyskeeda xoog ay dib ugu dhisaan noloshooda halkan. Xanuunku mar walba wuu xasuustaa qosolkeedii weynaa iyo dhoollacaddayntii faafinaysay.
Dhanka Johnson, waxay tiri 'Waan xanuunsanayaa had iyo jeer xusuusnow [Thuy's] shaqsiyad qallafsan, oo xoog badan. Waxay ahayd iftiin aad u iftiimaya. Way adag tahay in la aamino inay tagtay.
Waxaad akhrin kartaa gabalka inteeda kale at Madadaalada Todobaadlaha ah .
samaynta keegga sanduuqa dhadhamin sida roodhida
waxa fondant laga sameeyay
sida loo sameeyo ubaxyada shukulaatada moodada